Sangano reAfrica Centers for Disease Control and Prevention rinoti chinangwa charo ndechekuti vanhu vose vari muAfrica vanodarika bhiriyoni rimwe chete nemazana maviri emamiriyoni vabayiwe nhomba yeCovid-19.
Vachitaura pamusangano wevatori venhau waitwa padandemutande nhasi weCovax, mukuru we Africa CDC, Dr John Nkengasson, vati sangano ravo richaramba richishanda kusvika vanhu vemuAfrica vawana nhomba yeCovid 19
Vatiwo senzira yekuona kuti zvishuviro zvavo zvazadzikiswa, vati nyika dzemuAfrica dzichaita musangano mwedzi unouya musi waKubvumbi 12 kuti vaite hurukuro dzekuti Africa igadzirewo nhomba dzeCovid-19 sezvo nhomba idzi dziri kuwandirwa zvakanyanya izvo zviri kuita kuti dzishomeke pari zvino, nyika dzine mari dziri idzo dziri kutenga mishonga iyi zvakanyanyisa.
Nyanzvi mune zvehutano uye vakambove gurukota rezvehutano, VaHenry Madzorera, vati zviri kurongwa izvi zvakakosha vakati kugadzira mishonga iyi muAfrica kunobatsirawo kuti vanhu vemuAfrica vasazove ivo vanopedzisira kupihwa nhomba.
Musangano uyu wapindwa nenyanzvi dzakasiyana siyana kusanganisira mukuru weWorld Health Organisation, Dr Tedros Adhanom, nemukuru weUNICEF, Amai Henrieta Fore .
Zimbabwe iri kutarisirwa kuwana nhomba mamiriyoni matatu pasi pechirongwa cheCovax.
Unicef yatiwo irikushanda nevendege pamwe nezvikepe senzira yekuwona kuti nhomba pasi pechirongwa cheCovax dzasvika kunyika dzinotarisirwa kuti nhomba idzi dziende.
Zimbabwe, sedzimwe nyika dzepasi rose, iri mubishi rekurwisa chirwere cheCovid-19 icho chauraya vanhu chiuru chimwe nemazana mana nemakumi matanhatu nevasere, zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro.
Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nezana negumi nevashanu, 36 115, zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nevatanhatu nechirwere ichi nezuro.
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakanyevenutsa nezuro mitemo inobata chirwere cheCovid-19 kuitira kuti vanhu vatange kuita mabasa avo asi vachitevedza gwara reWorld Health Organization senzira yekuona kuti hapana kutapuriranwa kwechirwere ichi.